‘मलाई ट्याटु खोप्न मन लाग्छ’ – जया ओझा – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
‘मलाई ट्याटु खोप्न मन लाग्छ’ – जया ओझा
By डिजिटल खबर Last updated Sep 27, 2019 70 0
जया ओझा पछिल्लो समय लेखन कर्ममा सक्रिय छन्। एन्टेना फाउन्डेसनको उत्पादन रेडियो नाटक ‘मैसरी सुनाखरी’को उनले दुई वर्षसम्म स्क्रिप्ट लेखिन्। गत वर्ष उनले ‘आवरण’ उपन्यास बजारमा ल्याइन्। तेस्रो लिंगीबारे लेखिएको यस उपन्यासले उनलाई लेखिकाको रूपमा चिनायो।त्यस्तै ‘कवच’, ‘ब्रासलेट’जस्ता फिल्मको कथा पनि लेखेकी छन्। ‘परिबन्ध’ टेलिचलचित्रको स्क्रिप्टमा पनि जयाकै नाम छ। प्रस्तुत छ, अभिनय छाडेर लेखनमा आएकी जयासँग अजवी पौड्यालले गरेको संवाद।
तपाईं खासमा आफूलाई के भनेर चिनाउनुहुन्छ ?
पहिले त म असल नागरिक मात्र हो। त्यसपछि संघर्ष गर्दै गरेकी कलाकार, लेखक र कानुनको विद्यार्थी हुँ।
तपाईंको अभिनय यात्राबारे बताई दिनोस् न।
मैले यातना, अपराध, तीतोसत्य, भाग्य आआफ्नो, शंका, परिबन्ध, माटोले माग्दैन आफैंले दिनुपर्छ जस्ता टेलिफिल्ममा अभिनय गरेकी छु। केही ‘प्रहरी अनुरोध’का कथाहरूमा पनि काम गरेँ। नेपाल आमा, भाइमारा र भोजपुरी फिल्म साजन कि दिवानीमा पनि मेरो अभिनय देख्न सकिन्छ। धेरै म्युजिक भिडियोमा खेलेकी छु।
मोडलिङका सुरुवाती दिन कसरी सम्झनुहुन्छ ?
२०६३ सालमा ‘कदम’ नामक आधुनिक गीति एल्बम निकाल्ने क्रममा एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो पुगेकी थिएँ। त्यहाँ कर्णदासको आवाजमा रहेको एउटा गीतको भिडियो बन्न लागेको रैछ। त्यहाँको डाइरेक्टरले अभिनय गर्ने अफर गर्नुभो। यसरी म बिनायोजना कलाकार बनेँ। उक्त गीतको अभिनयपछि धेरै ठाउँबाट अफर आउन थाल्यो।
लेखनमा कसरी आउनुभयो नि ?
म सानैदेखि साहित्य लेख्न र पढ्न मन पराउँथेँ। गीत, गजल लेखिरहन्थेँ। कथा लेखनमा पनि रुचि थियो। संयोगले कलाकार बनेँ। यसले केही वर्ष लेखन र पढाइ पनि छुट्यो। तर, अभिनयमा कहिल्यै सन्तुष्टि भएन। समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक लागेन। पढाइ छाडेर सुटिङको लागि काठमाडौं बाहिर जान गाह्रो थियो। त्यसैले, मैले अभिनय नै छाडिदिएँ। म बौद्धिक व्यक्ति बन्न चाहन्थेँ। केही पहिचान बनाउन चाहन्थेँ। एउटा गीत रचना गर्दा खुब खुसी हुन्थेँ। यसरी लेखनमा आएँ।
ढाडमा ट्याटु अनि ग्ल्यामर ड्रेसअपले तपाईंलाई अभिनयले तानिरहेको जस्तो लाग्दैन ?
मलाई विशेषत सारी लगाउन मनपर्छ। बजारमा चलेका जस्तोसुकै फेसनका लुगा पनि मलाई सजिलो लाग्छ। म लुगाको विषयमा सौखिन र चुजी पनि छु।
हो म ट्याटु खोप्न मन पराउँछु। मेरो शरीरमा तीनवटा ट्याटु हानेकी छु। मलाई यसमा रमाइलो लाग्छ। म शिवजीको भक्त हँ। सानैदेखि व्रत बस्थेँ। अहिले त व्रत आदतजस्तो भइसक्यो।
तिमी बिना मर्छु भन्नेहरू पनि छन् ?
छन्, किन नहुनु। प्रेमका लागि रुने, धुने र धम्काउनेसमेत आए। आज मरिहत्ते गर्नेहरू भोलि अप्ठ्यारो पर्दा साथ नदिएको धेरै भोगेकी छु। त्यसैले प्रेममा म खासै विश्वास गर्दिनँ। कोही विशेष प्रेमी भनेर डेटमा अहिलेसम्म गएकी छैन। मिल्ने साथीहरू छन्। तिनीहरूसँग कामबारे सेयर हुन्छु।
सेक्सको बारेमा तपाईंको विचार ?
विवाह हुने ग्यारेन्टी भएको विश्वासिलो मान्छेसँग राखिएको यौन सम्बन्धलाई गलत भन्न मिल्दैन। यो सुन्दर अनुभूति पनि हो तर अचेल प्रेमका नाममा सहजै यौन सम्बन्धलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ, यो गलत हो। प्रेमबिनाको सेक्सले विकृति निम्त्याउँछ। प्रेममा दुर्घटनाको कारण नै सेक्स हो।
‘आवरण’ उपन्यासबारे कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
उपन्यासमा तेस्रो लिंगीहरूको विषय समेटिएको छ। धेरै पाठकले जया ओझा नै त्यस्तै हो रैछ भन्दै हिँड्नुभयो। कति केटा साथीहरूले जया त्यस्तो खालको भएर पो हाम्रो प्रेमप्रस्ताव स्वीकार नगरेकी रैछ भन्दै व्यक्तिगत रूपमा टीकाटिप्पणी पनि गरे। मैलै सार्वजनिक रूपमै आफू तेस्रो लिंगी नभएको बताउनु पर्‍यो। खासगरी तेस्रो लिंगीहरूले एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिए।
असोज १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने
घटस्थापनादेखि दशचक्के सवारीलाई काठमाडौं प्रवेश गर्न नदिइने
झण्डै २५ वर्षपछि माइकल ज्याक्सनको त्यो मुम्बई कन्सर्टको कर माफीकाे निर्णय
सिनेमा हल खोल्ने सरकारको तयारी
चौबीस घण्टामा २३२ संक्रमित ८ को मृत्यु
आजदेखि ‘कोभिशिल्ड’ खोप प्रदेशमा पठाइँदै, भोलिसम्म सबैमा…
कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या १ लाख ५३ हजार नाघ्यो
कोरोना खोपले शरीरमा कसरी काम गर्छ ?
विश्वका ६० देशमा पुग्याे कोरोनाको नयाँ प्रजाति, पहिलेको…
सावित्राको कौसी खेती लोभलाग्दो
जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीको ३७ औं साधारणसभा सम्पन्न
सामसङको नयाँ स्मार्ट फोन नेपाल आउने
नेपाल बैंकको दोलखामा एक्सटेन्सन काउन्टर
जनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई भने मबाट धोका हुदैनः…
रुसमा विद्रोही नेताको समर्थकको विरोध प्रदर्शनबाट थुप्रै…
Pakistan’s Khan: India’s BJP conducted 2019 air raid to win…
१० माघ २०७७, शनिबार १९:१४
१० माघ २०७७, शनिबार १९:०४
१० माघ २०७७, शनिबार १८:५३